‘प्रधानन्यायाधीश र केपी ओलीबीच सेटिङ छ’- बिडारी « Harekpal
हरेकपल November 11, 2021
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बिडारी अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने आधार र कारण रहेको उनी बताउँदै आएका छन् । तर, उनकै पार्टी माओवादीले न्यायालयको विवाद आन्तरिक भन्दै कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायालयभित्रैबाट यो समस्याको समाधान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीसंग गरिएको कुराकानीः
–न्यायालयको विवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधारहरु छ भन्नुभएको थियो । तर तपाईंको पार्टीको स्थायी समितिले न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्यो नि ?
–महाभियोगका आधार के के हुन् ?
–प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र दलहरूले महाभियोग नलगाउने, निकास कसरी हुन्छ ?
–सत्ता गठबन्धन पनि त अग्रसर भएन, तपाईंको पार्टी पनि तयार छैन? यसलाई पनि सेटिङ मान्ने ?
–त्यो सेटिङ भत्काउन गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएन?
–तपाईंले पार्टीभित्र यी कुराहरू राख्नुभयो ?
–बारको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
–न्यायाधीशको आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परे नि ?
–तपाईं अधिवक्ता पनि हो, आन्दोलन विभाजित जस्तो देखिन्छ । सेतोपट्टी बाध्ने, राजीनामा नदेउ वैधानिक माग पूरा गर भन्ने पनि छन् नि ?
–अबको निकास के हो त ?